मधुपर्क २०६७ साउन – मझेरी डट कम
साहित्यकार जगदीश घिमिरे बीसको दशकदेखि स्थापित नाम हो । उनका कथा, कविता, उपन्यास, संस्मरण गरी दस कृतिहरू प्रकाशित छन् । उनले लामो समय लेखन विश्राम लिए पनि ‘अन्तर्मनको यात्रा’ को अत्याधिक लोकप्रियताले त्यस्तो अनुभूति गराउँदैन ।
लघुकथामा कलम चलाउनेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ । छोटो लेखनी चोटिलो प्रहार लघुकथाको मुख्य विषेशता हो । त्यसैले पनि लघुकथातर्फ धेरै कलमकर्मीहरूको सक्रियता रहँदै आएको छ । लघुकथा पाठकका लागि पनि सरल र सहज किन हुन्छ भने यसका लागि लामो समय खर्चिरहनु पर्दैन ।
आञ्चलिक कथाको स्वाद
लेखनको लामो समयको अन्तरालपछि खोटाङका कथाकार हिराधन राईको जन्मियो ‘खोलीबुङ’ कथा सङ्ग्रह । कथा सङ्ग्रहले खासगरी पूर्वी भेगको आञ्चलिक कथाको उत्कृष्ट स्वाद पस्किएको छ ।
नेपाली साहित्यमा डेढदशक यता गजल विधाले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । लोकप्रियताको शिखरमा रहेको यस विधाका सयौँ कृतिहरू प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन् । सभा-गोष्ठीहरूमा गजलकै बाहुल्य प्रष्ट देखिन्छ । नयाँ-पुराना सबै स्रष्टाहरूलाई यसले आफूतिर अत्यधिक आकर्षित गरिरहेको छ । गजल विषयक ग्रन्थहरू पनि धमाधम प्रकाशनमा आइरहेका छन् ।
सुन्दर कविताहरूको सँगालो
नवराज सुब्बा नेपाली साहित्यमा कवि र निबन्धकारका रूपमा परिचित नाम हो । ‘जीवन मेरो शब्दकोशमा’ (कवितासङ्ग्रह २०६३) र ‘मनको मझेरी’ (निबन्धसङ्ग्रह-२०६४) प्रकाशन गरेर साहित्यिक जगत्मा पृथक् पहिचान र प्रभाव देखाउन सफल नवराज सुब्बाले ‘बीच बाटोमा ब्यूँझेर’ (कवितासङ्ग्रह-२०६५) पाठकसमक्ष पस्केका छन् ।
नेपाली राजनीतिक कथाहरू: लोककथाको महत्त्वपूर्ण कृति
कथा आजको अत्यन्तै लोकप्रिय विधा हो । कथामा धेरै प्रयोगहरू पनि भएका छन् । आजको सर्वाधिक चर्चा र आकर्षणको विषय राजनीति हो । राजनीतिकै कारण देश र जनताले दुःख पाएको अवस्थामा राजनीति विशेष चासोको विषय हुँदोरहेछ । चासोकै कारण यी विभिन्न समय खण्डमा साहित्यकारहरूले राजनीतिलाई आफ्नो साहित्यिक कृतिहरूमा सम्बोधन गर्दै आएका छन् । कवितामा मात्र होइन गद्याख्यानमा पनि राजनीतिले यथेष्ट सम्बोधन पाएको छ । कथामा त अझ विशेष रूपमै राजनीति सम्बोधित छ ।
नेपालमा धेरै वर्ष दरोसँग जरो गाढेको राजा गयो । राजा गएपछि राजतन्त्र पनि स्वतः जाने भइहाल्यो, गयो । उही सानातिना र झिनामसिना राजतन्त्र रहृयो भने, त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यो त पार्टीहरूभित्र पनि विचित्रसँग टाँसिएर रहेको हुन्छ । जहाँ ठूलोमान्छेको आज्ञा सानोमान्छेले पालना गर्नुपर्छ, त्यहाँ अपरिहार्य र अटल हुन्छ । जेहोस् मूलरूपमा राजतन्त्रको पुल भाँचियो, खाँबो ढल्यो । राजतन्त्र गएपछि छुमन्त्र गरेझैँ प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र भएभरको तन्त्रलाई पनि नाघेर एकैचोटि गणतन्त्रको स्थापना भयो । गणतन्त्र भएपछि हामीले ल्याएको भनेर, जस् लिने होडबाजी चल्यो । मैले छातीमा हात राखेर, फुर्तीका साथ भन्नुपर्दा, छ पार्टीको नेतृत्वमा जनताले ल्याएको हो-हो ! अरू कसैले थपक्क ल्याइदिएको होइन । कसैको बाबुको बपौति होइन ।
अनधिकृत शब्दहरूमाझ दिनदहाडै हत्याकाण्ड मच्चाएर उभिन्छन्,
कुभिण्डोलाई खुट्टा लगाइदिएर
हिँड्न सक्तैन भन्ने मलाई थाहा छ
ढेंडुलाई पगरी पनि कति गुथाइरहनु र !
ए मेरी आमा कता छौ तिमी
कहाँ छौ भनन
आमाको जस्तो पवित्र माया
कहाँ पाउछुँ भनन
प्रतिबन्धित छन् प्रेम कविता ।
मैले जूनलाई लेखे पनि
तिमीलाई लेखेको हुन्छ ।
देह र अङ्ग
हुन्छ नाम र अस्तित्व
प्रत्येक अङ्गको तर
सबै अङ्ग मिलेमात्र
देह बन्दछ सुन्दर !
बाँच्नुपर्ने दिनहरू, वर्षहरू
अझै धेरै, धेरै छन्
जस्तो लागेर आयो ।
पाँच टुक्रे कविता
च्यातेर भ्रमको पर्दा
थुक्यो भने ऐनाभित्रको मान्छेले
पर्खिनु है मेरो हजुर वरपीलझैं छाउने भए ।
जानैपर्छ उहीँ बदल्न सकिने देखिन्न सामर्थ्यता ।
के फुल्छौ मनमा सँगाली धमिलो जान्दिन केही मता ।।
युगौंयुग हुने यसै नबुझने के गर्नु तिम्रो धन ।
कालो बादल छाडिदेउ मनको मायालु सब्को बन ।।